Wasiirka Arimaha Dibada Ee Britain Oo la Magacaabay. | Awdalmedia.com
Wasiirka Arimaha Dibada Ee Britain Oo la Magacaabay.
Ra'iisul wasaaraha Britain, Theresa May ayaa la kulantay cadaadis xoogan oo kaga imaanayay xisbigeeda, taasi oo ku saabsaaneyd qorshaha ay ku wajaheyso ka bixida midowga Yurub.
Magacaabida wasiirka cusub ayaa timid, kadib markii Boris Johnson uu sheegay in uusan la dhacsaneyn qaabka Theresa May ay u wajaheyso ka bixida mdiwoda Yurub, waxaana uu noqonayaa mas'uulkii labaad ee iscasila muddo afar iyo labaatan saac.
Waxaa sdioo kale soo baxaya warar sheegaya in siyaasiyiinta qaar ee iscasilay ay u hanqal taagayaan xilka ra'iissal wasaarinmada, inkastoo ra'iisul wasaare Theresa May oo ka hadleesay aqalka baarlamanka ay beenisay wararkaasi.